Inona no vatosoa sarobidy sarobidy sy halimo? Sarobidy sa sarotiny?
Zavamaniry sarobidy sarobidy sy semi-precious
Araka ny siansa jeolojika, misy sokajy anankiroa ho an'ny diamondra: vatosoa sarobidy sy vato sarobidy.
Tsy misy vatosoa sarobidy 4
Ny vato sarobidy 4 dia diamondra, ruby, safira, ary emeralda.
Ny momba ny fianakaviana 70 sy ny karazany 500 dia sokajiana hozatra
Ireo vatosoa betwin manify sy vato hafa dia ny fampiasana azy ireny mba hanaovana firavaka raha mbola tsy misy vato hafa.
Ny lalàn'ny tsena
Mifanohitra amin'izay heverin'ny ankamaroan'ny olona, ​​ny hany antony iray mahatonga ny vato ho lasa sarobidy dia tantara. Raha ny marina, momba ny 500 taona lasa izay, ny herin'ity tontolo ity dia tsy liana tamin'ny vato efatra ihany. Tamin'izany fotoana izany, ireo vato hafa dia tsy nisy vidiny. Azontsika heverina fa ny vato lamaody, tamin'izany fotoana izany ary mbola mitoetra izy ireo, mandraka androany, ireo vatosoa tena sarobidy indrindra amin'ny mahery.
Izany dia mampiseho mariky ny harena sy ny fahefana. Ary noho izany antony izany ihany koa dia mbola mitoetra amin'izao fotoana izao, ny vato faran'izay lafo indrindra.
Tsy misy fanazavana ara-tsiansa àry. Fa noho ny lalàna momba ny tsena, na ny lalàn'ny famatsiana sy ny fangatahana.
Handre momba ny opal "sarobidy", tanzanite, alexandrites ary vato maro hafa ianao. Diso tanteraka izany. Saingy io dia teboka fivarotana ampiasain'ny mpivarotra vatosoa hisarihana ny mpanjifa, ary hanisy sanda amin'ny vato, manantena ny hahazoany vidiny fivarotana tsara kokoa.
Ny ankamaroan'ny mpivarotra vatosoa dia tsy gemologists ary matetika mieritreritra fa fantany izay lazainy, rehefa ny vidin'ny fividianana sy ny vidin'ny fivarotana no antenain'izy ireo ho azony ihany. Ny ankamaroan'izy ireo dia tsy mahalala ny maha samy hafa ny vato voajanahary sy ny vato sentetika. Mahagaga, sa tsy izany?
Izany no mahatonga ny laboratoara gemolojika izay manamarina ny vato. Mampitombo ny vidin'ny mpivarotra izany, saingy manamora ny varotra.
Sarobidy sarobidy sarobidy sy seminera
Ny fahadisoam-panantenana iray hafa dia ny vatosoa sarobidy voajanahary tena ilaina tena lafo. Raha ny marina dia tsy marina foana izany. Raha ny marina, ny diamondra, ny ruby, ny safira na ny emeralda dia mety tena sarobidy ara-bola. Miankina amin'ny kalitaony izany. Na dia ny vatosoa avo lenta avo indrindra aza dia mety handoitra bebe kokoa noho ireo vatosoa sarobidy ambany.
Raha fintinina, vatosoa sarobidy sy semi-be dia mety lafo vidy na tena sarobidy.
Raha liana amin'ny hevitrao ianao, te-hiala amin'ny teoria hampihatra, dia manolotra gemology taranja.